2016 june / july movie collection | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » 2016 june / july movie collection	14
Posted by အောင် မိုးသူ on Jun 20, 2016 in Creative Writing, Drama, Essays.., Movies/TV | 14 comments
2016 June / July မှာ ထွက်ရှိမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေပါ။ ထွက်မယ့်ဇာတ်ကား အများကြီးထဲက အချိန်ကုန်တာနဲ့ ကြည့်ရတာ တန်မယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေကို ရွေးချယ် တင်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်လေးတွေကို တစ်ပုံချင်းစီ နှိပ်ကြည့်ပြီးဖတ်လို့ရပါတယ်။
2003 ခုနှစ်မှာ Finding Nemo ဆိုပြီး ထွက်ခဲ့တဲ့ animation ရုပ်ရှင်ကားဟာ အရမ်းကိုနာမည်ကြီးခဲ့ပါတယ်။ အခု ၁၃နှစ်ကြာပြီး နောက်မှာ Finding dory ဆိုပြီး နောက်တစ်ကား ထွက်ရှိလာပါတော့မယ်။ Nemo ဆိုတဲ့ ငါးလေးရဲ့ သူငယ်ချင်း Dory ဆိုတဲ့ ငါးပြာလေး အကြောင်းပါ။ စောင့်ကြည့်ရမှာ တန်မယ့် ဇာတ်ကားလို့ မျော်လင့်မိတာပါပဲ။
GhostBusters ပရိတ်သတ်တွေအတွက် နောက်ထပ် ထွက်ရှိလာမယ့် ကားအသစ်ပါ။
စိတ်အပန်းပြေစေမယ့် comedy ဇာတ်ကားတစ်ကားပါပဲ ဘယ်လိုမျိုး အခွီ အနှောက် ဟာသတွေနဲ့ အမေတွေကို တွေ့ရမလဲဆိုတာ ဇာတ်ကား ပိုစတာက ဆွဲဆောင်လို့နေပါတယ်။
Ice Age ဟာ အသစ်ထွက်ရှိတိုင်း မရိုးနိုင်တဲ့ ရသတွေကို ပေးပါတယ်။ အခု ကားသစ်မှာလည်း ဘယ်လိုမျိုး ရသတွေပေးဦးမလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်သင့်တဲ့ ဇာတ်ကားပါ။
ပထမဇာတ်ကားမှာတော့ လူသားတွေဟာ ဂြိုလ်သားတွေကို တွန်းလှန်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ထင်တဲ့အတိုင်း ဂြိုလ်သားတွေဟာ နောက်ထပ်တဖန် ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဖို့ ကမ္ဘာမြေကို ရောက်ရှိလာတဲ့အခါ။
Jungle Book နဲ့ ကွဲထွက်ပြီး ဘယ်လိုမျီုး ဇာတ်လမ်းအသစ်နဲ့ ရောက်ရှိလာမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါ။
Animation ဇာတ်ကားသစ်ပါ။ ကျေနပ်မှုတွေပေးဦးမယ်ဆိုတာ မလွဲပါဘူး။
Conjuring လိုပဲ ဒီသည်းထိတ်ရင်ဖိုကားဟာ ကြောက်စရာကောင်းမှာ အသေအချာပါပဲ။
မင်းသား Zac Feron ပါဝင်တဲ့ ဟာသကားသစ်ပါ။ စိတ်အပန်းပြေစေမှာ အသေအချာပါပဲ။
The Purge ဟာ တစ်ကားနဲ့တစ်ကား မရိုးတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ တင်ဆက်နေကြပါ။ အခု တတိယမြောက်ကားမှာ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းနဲ့ သည်းထိတ်ရင်ဖို တင်ဆက်ဦးမလဲ။ ဘယ်လို အတွေးအခေါ်တွေ ထားခဲ့ဦးမလဲဆိုတာ ရင်ခုန်စရာပါ။
Disney ရဲ့ ထုံစမ်းအတိုင်း မရိုးတဲ့ဇာတ်လမ်း ပုံပြင်ဆန်ဆန်တွေ ပါလာဦးမှာ အသေအချာပါပဲ။
kai says: Independence Day တော့ ရုပ်ရှင်ရုံမှာ..သွားကြည့်ဦးမလား တွေးနေ..။
ဂျက်စပဲရိုး says: independence day ရယ် lights out ရယ် ရုံမှာ သွားကြည့်ချင်တယ်။
ဒါမှ အသံကောင်းကောင်း စကရင် ကြီးကြီး နဲ့ ကြည့်ရအောင်လို့
ကျန်တာတွေတော့ အခွေအကြည်ထွက်အောင် စောင့်လိုက်ပါ့မယ်လေ။း)
အောင် မိုးသူ says: Independence Day, Light Out, The Purge ကို စိတ်အဝင်စားဆုံးပါ
ဂျက်စပဲရိုး says: ကြည့်ချင်တဲ့ ရုပ်ရှင်တွေ အရမ်းများနေတယ်။
ခင်ဇော် says: သွားတာလာတာ။
ဖြတ်သွားရတဲ့ရှော့ပင်းမောမှာ စိတ်မထိန်းနိုင်ရင် စတဲ့ အခြေအနေတွေကြောင့် ရုပ်ရှင်တစ်ကားကြည့်ဖို့ သိပ်သိပ်အကုန်အကျများလွန်းတယ်ကွီ။
ဂျက်စပဲရိုး says: တား ဂ နျှောက်စာ ကုန်တာဘာာာာ
အောင် မိုးသူ says: ဒီမှာ နှစ်ယောက်သွားကြည့် မုန့်စားတာနဲ့ အနည်းဆုံး တစ်သောင်းပဲ။
ဂျက်စပဲရိုး says: မမဂျီး က တော့ ရှော့ပင်းမောလ် ထဲ စိတ်မထိန်း ဘဲ ကုန်တာ က ၉၀% ထင်ရဲ့။
လုံမလေးမွန်မွန် says: Comedy နဲ့ Drama တွေဆို ကြည့်တယ် . . . သည်းထိတ်ရင်ဖို သရဲကား fighting ကားတွေဆို လုံးဝမကြည့် . . . ဒီနှစ်ထဲ ပျော်စရာကားတွေ များတယ်ထင်တယ် . . . ဒီနေ့ Now You See Me2သွားကြည့်မို့
အောင် မိုးသူ says: ခုပြောတဲ့အထဲမှာ Comedy & Drama တွေ ပါတယ်။
ဦးကြောင်ကြီး says: အောကားလုပ်ပါကွာ… တခါလာလည်း မအောကား တခါလာလည်း မအောကား… လခွီး… မှောင်သူ နီ၆နေလား…
အောင် မိုးသူ says: အူးကြောင် အောကားကြည့်ချင်ရင်ကွကိုယ် xxx မှာကြည့်ပေါ့
Thint Aye Yeik says: independence day နဲ့ lights out ကို စိတ်အဝင်စားဆုံးပဲ…